Xian ရှိသည်ပျော်စရာနိုင်သလား? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ကိုယ့်မနေ့ကဒီဂျာနည်းဥပဒေတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းစောင့်ကြည့်. သူဟာအသင်းတော်များနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည်. သူ့အတှေ့အကွုံမြားသည်အသင်းတော်၌အစဉ်အမြဲသင်အဖြစ်လာကပြောပါတယ်, ဒါပေမဲ့တကယ်ကရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှ. သူကကြိုဆိုခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှ. ထိုမင်းသည်မိမိအသက်ကိုသို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလျှင်လူဟုမေးသောအခါ, သူကအဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုသည်. သူရည်ရွယ်သူကယခုယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားမှတ်တမ်းများစေခဲ့ကြောင်းထင်. သူခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အားပေးခဲ့သောရုပ်ပုံသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်ဘယ်မှာတ; သင်ခံစားခဲ့ကြရတယ်အရာအားလုံးခံစားရပ်တန့်ခဲ့ရတယ်. လျှင်အဖြစ်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပြုချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်အရာဖြစ်ပါသည်!
ဤတွင်ပျော်စရာအဘိဓာန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လိုဖွင့်. ပျော်စရာဖြစ်ပါသည်: ခံစား၏တစ်ဦးအရင်းအမြစ်, ရွှင်မြူးခြင်း, သို့မဟုတ်နှစ်သက်. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်သင်၏နားလည်မှုနှင့်ခံစား၏အတှေ့အကွုံကိုဆိုလိုသည်မရှိမေးခွန်းရှိပါတယ်, ရွှင်မြူးခြင်း, နှင့်ပျော်မွေ့ပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်အတူတူနေဖို့နိုငျလြှငျသငျသညျကိုအံ့ဩနေတယ်ဆိုရင်, ကမတတျနိုငျ. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသငျသညျဘဝကိုမြင်လမ်းကိုပြောင်းလဲမသံသယရှိပါတယ်.
အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပျော်စရာကူညီသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေပါဘူး? ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်သင်၏ခံစား၏ရန်သူဖြစ်, ရွှင်မြူးခြင်း, နှင့်ပျော်မွေ့? သို့မဟုတ်ပါကသငျသညျခံစားတွေ့ကြုံခံစားကူညီပါဘူး, ရွှင်မြူးခြင်း, နှင့်၎င်းတို့၏စစ်မှန်တဲ့သဘောနှစ်သက်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌လူတိုင်းလက်ျာကဆည်းပူးခဲ့ဖူး? ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်ပျော်စရာအရောင်စဉ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းပေါ် Are?
ငါကလူခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းပြောဆိုအကြောင်းရင်းများထဲမှဤနည်းသောကြောင့်, ခရစ်ယာန်တွေကိုမီဒီယာအတွက်ပုံဖော်နေသောလမ်းသည်ထင်. ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗီရှိုးအတွက်မဆိုခရစ်ယာန်ကောင်လေးအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအများအားဖြင့်စျကွောစီရငျနှင့် corny င်. လူတွေကမတရားခရစ်ယာန်များစွာ caricature နှင့်အများဆုံးရယ်စရာပစ္စည်းပစ္စယမှအာရုံစူးစိုက်မှုပေးပါ.
ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အအချို့သောခရစ်ယာန်နှင့်ခရစ်ယာန်များသည်ကြောင်း Vibe ချွတ်ပေးသူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်သောသူတို့အားဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအသွင်မြင်လာအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေ. တချို့ကခရစ်ယာန်တွေကိုတကယ်ဘာမှမွေ့လျော်ကြဘူးသူတို့သည်ဘုရားသခင်အပေါ်အပြစ်တင်, ဒါဟာသူ့အမှားရဲ့လျှင်အဖြစ်.
ဒါနဲ့အဘယျသို့ထင်ပါသလဲ? ငါဒီညများအတွက်မေးခွန်းနှစ်ခုအဖြေကိုရှိ. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်ငါ့ပျော်စရာ၏အဆုံးကိုဆိုလိုတာ? ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအဖြေဖြစ်ပါသည်: အဘယ်သူမျှမ
ငါ. အဘယ်သူမျှမ - ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းသင့်ပျော်စရာ၏အဆုံးအဓိပ်ပာမဟုတ်
သင်အမှန်တကယ်ကအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, မေးမြန်းဖို့ထူးဆန်းမေးခွန်းရဲ့. "ခရစ်ယာန်တစ်ဦးခံစား၏အဆုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်လာပါသလား, ရွှင်မြူးခြင်း, နှင့်ငါ၏အသက်တာ၌ပျော်မွေ့ခြင်း?"ဒါဟာအဲဒီမေးခွန်းမေးရန်ဘုရားသခင်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကပြောပါတယ်. ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏အောက်ပါခရစ်ယာန်တစ်ဦးနည်းလမ်းများဖြစ်ခြင်း အကယ်., ထို့နောက်သူကတောင်းရဲ့မေးခွန်း rephrase မှ: ဘုရားသခငျသညျသငျသညျတခု un-ပျော်စရာဘဝရှိချင်ပါသလား? ဟုတ်ကဲ့ဖြေဆိုရန်ကိုယ်တော်နှင့် ပတ်သက်. သစ္စာကိုဖျက်တစ်ခုခုကပြောပါတယ်. သူအပေါငျးတို့သအသက်တာ၏ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့. သင်တန်းသူသည်သင်တို့ကိုသူဖန်ဆင်းသောဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့လိုလား.
Jay-Z သို့မဟုတ် Kendrick Lamar သငျသညျမိမိအနောက်ဆုံးပေါ်အယ်လ်ဘမ်ကိုမုန်းဖို့လိုလားလျှင်၎င်းသည်တောင်းနှင့်တူရဲ့. သူသင်ရုံကတဆင့်ခံစားချင်နှင့်ကိုမုန်းခဲ့? သို့မဟုတ်စတီဗင်နဲ့တူပီးလ်ဘာ့ဂ်သူ၏ရုပ်ရှင်ကိုမုန်းချင်တယ်, သင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးလင်ကွန်းကိုမုန်းသောကြောင့်, သို့မဟုတ်သူသည်လည်းသင်တို့ကိုပယ် doze ချင်တယ်. ကောင်းပြီသင်တန်းမ! သူတို့ကလုပ်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, အခြားသူများကမွေ့လျော်မယ်လို့နိုင်အောင်.
ဘဝကကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဖျော်ဖြေရေးအချို့ကိုပုံစံကိုမဖွင့်သောကြောင့်,, ဒါပေမယ့်တူညီရှိပါတယ်. အဘယျသို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာ၌မှသိသညျဘုရားသခငျအကောင်းတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျဖြစ်ပါတယ်. သူကဘဝကိုဖန်တီး. သူကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝမှဘဝအသက်ရှင်ရန်လိုလား. သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘဝပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ထိုသို့ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်လိုလား.
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာခံစားချင်ပါဘူးကြောင်းအကြံပြုသောကျမ်းစာထဲမှာဘာမှမရှိဘူး. သငျသညျကမျြးစာကိုဖတ်ရတဲ့အခါကန့်သငျသညျအရင့်ပုံကိုမဖွင့်. လူငျသညျယရှေုကိုပြောပါတယ်တဲ့ကျမ်းပိုဒ်ရှိ၏ထင်ချင်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းပြောဆိုအဆိုပါလမ်း, "သင်ငါ့နောက်သို့လိုက်နေလျှင်, သငျသညျစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရပါမည်, အရာအားလုံးကိုမုန်း, သင်နဲ့တခြားသူတွေကိုချဆွဲယူပါ။ "ဒါပေမဲ့သင်နဲ့တူမဆိုကျမ်းပိုဒ်ကိုရှာဖွေသွားမဖွင့်.
လူတွေကဘုရားသခငျသညျကောငျးသောအရာကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလားထင်, ဒါပေမယ့်မုသားင်. ဂျိမ်းကိုနားထောင် 1:16-17.
လှည့်ဖြားခြင်းကိုမပြုကြနှင့်, ငါချစ်သောညီအစျကို. တိုင်းကောင်းသောဆုလက်ဆောင်ရှိသမျှစုံလင်သောဆုကျေးဇူးကိုအထက်မှဖြစ်ပါသည်, ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုမရှိမူကွဲသို့မဟုတ်အရိပ်လည်းမရှိအဘယ်သူကိုနှင့်အတူအလင်းအိမ်၏ခမညျးတျောမှဆင်းလာမယ့်. (ဂျိမ်း 1:16-17)
ဘုရားသခင့ကောင်းသောအမှုအရာမှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မကြိုးစားပါဘူး; ဘုရားသခင့အားလုံးကောင်းသောအရာ၏အရှငျဖြစ်ပါသည်. သူကအရင်းအမြစ်င်. ဒါကသူတို့ရဲ့အမိုးအကာများအတွက်ပေးဆောင်သူတွေကိုနှင့်အဝတ်ကိုသူတို့အဘို့အကောင်းသောအရာလိုလျှင်တောင်းသည့်မိဘမဲ့ဂေဟာမှာကလေးတွေနှင့်တူရဲ့. သူတို့ကဒါသင်သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုဘူးအရာအားလုံးကိုများအတွက်ပေးဆောင်? ဒါဟာယုတ္တိမတန်မေးခွန်းရဲ့.
ဘုရားသခင့ချစ်ကြည်ရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုဖနျ. ဘုရားသခင့ပြုံးဖန်တီးရယ်မောခြင်း. ထိုသူအပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ထံမှဆုကျေးဇူးတော်တို့ကိုအလွန်ရှိပါတယ်. ဒီတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုပျော်မွေ့ချင်ပါဘူးတူလုပျဆောငျဖို့ရယ်စရာဖြစ်ပါသည်.
ယေရှုအကြောင်းအဘယျသို့? သူသည်ဤအကြောင်းကိုပြောစရာရှိပါသလား? ယောဟနျသခုနှစ်တွင် 10, ယရှေုသညျအယူမှားဆရာများနှင့်အတူကိုယ်တော်တိုင်နှငျ့ဆနျ့ကငျြ. ဤရွေ့ကားဆရာအတုအယောလမ်းလွဲလူဦးဆောင်; သူတို့မကောင်းတဲ့အချင်းသိုးထိန်းတို့ဖြစ်ကြသည်. ယရှေုသညျသူခိုးသူတို့ကိုခေါ်ဆို.
"ဒီသူခိုးခိုးယူဖို့လာ, ကိုသတ်ပစ်, ဖျက်ဆီး. ငါသူတို့ဘဝရှိစေခြင်းငှါ လာ. ,, နှင့်ဖောဖောသီသီကရှိသည်။ " (ယောဟနျသ 10:10)
ဤလူမျိုးကိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌အဘယ်သို့ဆန့်ကျင်သို့တိုက်ရိုက်ဝင်. သူတို့ကဘုရားသခင့ခိုးယူဖို့လိုလားထင်. ငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းခိုးယူ, ပျြောရှငျမှု, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အလိုတော်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုသတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချဆွဲယူစလေိုကွောငျး. သို့သော်သခင်ယေရှုကပြောပါတယ်, သူကပေးရသည် လာ. အပေါများဘဝတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအသက်ပေတည်း. သူကကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသက်ရှင်ဖို့လိုလား. ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကြောင်းအကြောင်းပိုမိုစကားပြောလိမ့်မယ်.
ဆာလံခုနှစ်တွင် 16, ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်အားပြောနေတာဒီမှာသူမိန့်င်ဖြစ်ပါတယ်.
"သင်ငါ့ကိုအဖို့အသက်တာ၏လမ်းကြောင်းပြသကြလော့; သင်တို့မျက်မှောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏ပြည့်စုံခြင်းမရှိ; သင့်ရဲ့လက်ျာဘက်၌အစဉ်အမြဲပိုပြီးအပျော်အပါးပါ။ " (ဆာလံ 16:11)
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အားပိုမိုနီးကပ်စွာလာမယ့်ပျင်းစရာဝမ်းနည်းမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပါဘူး, ထိုသို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှဦးဆောင်. ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မဆိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ပေမယ်တန်ဆာရုံသာမက. ထိုအပျြောအပါးလိုရှိပါတယ်. မငါးမိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်သက်၏ငါးနှစ်ကြာ, ဒါပေမဲ့အပျော်အပါးအစဉ်မပြတ်.
ငါသည်ဤတူကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူနေ့ရက်ကာလအဘို့ပေါ်သွားနိုင်. ခရစ်ယာန်ဘာသာခံစား၏ရန်သူမဖြစ်, ရွှင်မြူးခြင်း, နှင့်ပျော်မွေ့. ဒါဟာတကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ခံစားဖို့လမ်းဖွင့်, ရွှင်မြူးခြင်း, နှင့်ပျော်မွေ့.
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မ IMAX 3D အတွက်ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါသွားလေ၏. သငျသညျသူတို့အပျေါထားရန်သင်သည်ဤကြီးမားသောရှုပ်ထွေးမျက်မှန်ပေးသိ. အစားသူတို့အားမျက်မှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကနေအိပ်မျက်နှာဖုံးများကိုဆောင်ခဲ့အဘယ်သို့လျှင်? သင်လူအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုထုတ်ပိတ်ဆို့ကမျက်မှန်နဲ့တူပေါ်တွင်တင်သူတို့အားအမှုအရာသိ? သင်သည်တစုံတခုဒါပေမဲ့မှောင်မိုက်ကိုမမြင်မိပါဘူး.
အခုတော့အစား 3D မျက်မှန်၏ငါတို့သည်အအိပ်မျက်နှာဖုံးများပေါ်တွင်တင်လျှင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်အဘယျသို့? ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုရုပ်ရှင်လက်လွတ်ချင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်သူတို့အား 3D မျက်မှန်ပေါ်တွင်တင်ကတည်းက. ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်၌ရှိတူကဖြစ်. ဒါကြောင့်လေထုထဲတွင်တက်ကို float မပြုခဲ့ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ၏သောက်ဆင်းကိုင်ထားခဲ့သည်. ပစ္စည်းပစ္စယကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ခဲ့သည်. ပစ္စည်းပစ္စယကျွန်တော်တို့ကိုမှာလာမယ့်ခဲ့သည်. အဆိုပါမျက်မှန်ဘဝကိုအတှေ့အကွုံကိုဆောင်ခဲ့.
သူကိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှာအိပ်မျက်နှာဖုံးလက်ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့တူကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ပြုမူဆက်ဆံ, တကယ်ကသူကို 3D မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးလက်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါ. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေမယ့်, နှင့်မှောင်မိုက်၌ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်တိုးမြှင့်ခံရဖို့လိုလားနှင့်အပြည့်အဝပေးရန်. ဒါကြောင့်ခံစားခံရဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘဝခံစားလိုလား. ဝမ်းနည်းစရာကျမတို့အမြဲလိုကြည့်သောအရာကိုမသိကြပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာကျနော်တို့ပျော်စရာကျွန်တော်တို့မဆိုအပ်ပေးတော်မူယခုအချိန်တွင်လိုခံစားရသမျှလုပ်နေတာအဓိပ္ပာယ်သောအထင်အမြင်အောက်မှာရောက်နေသည်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုစဉ်းစားလျှင်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးတစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးင်သိ. အဘယ်သူသည်သူတို့လုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရအရာအားလုံးကိုတစ်ကျွန်ဖြစ်လိုလား? ကျနော်တို့အပွောငျးအလဲင်.
ငါ့သားပျော်စရာရှိသည်ဖို့လိုလားတော်မူထွက်ပေါက်အတွက်လက်ညှိုးကပ်ကြောင်းပြုပါရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်. သူကငါ့ထံမ​​ှလမ်းညွှန်မှုလိုအပ်ပါတယ်. အကြှနျုပျ၏သားကိုပျော်စရာရှိသည်ဖို့သွားမယ့်အစားသူကငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့ရှိပါတယ်သေဆုံးလျှင်. သူကလှေကားကဆင်းလမ်းလျှောက်ပျော်စရာကြည့်ထင်. သို့သော်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်, ငါကသူကောင်းစွာမသွားမပါဘူး, သူကဆင်း tumble ပါလိမ့်မယ်သင်သိရ.
ဘုရားသခင့အသက်တာ၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်သူသိတယ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ရှိသမျှသည်-ကိုမသိမနေအသိအမှတျပွုမယ်လို့. ကျွန်တော်တို့နားမလည်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. အကြှနျုပျတို့အပွစျသားနေသောကြောင့်,, ကျွန်တော်မှားသောအရာတို့ကိုတန်ဖိုးထား. ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်နှင့်သူ၏အကျင့်စရိုက်ယုံကြည်ကိုးစားရန်ရှိသည်.
အချို့လူများကထင်, "အဲဒီကောင်းတဲ့အသံသျောလညျးဘုရားသခငျပျော်စရာအမှုအရာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောသမျှသောသူတို့အားပညတ်တို့ကိုရှိပါတယ်။ " ထိုအသင်မှန်နေ; အခြို့သောအမှုအရာမှကျွန်တော်တို့ကိုတားမွစျကွောငျးကိုပညတ်တော်ရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာပျက်စီးကြလိမ့်မည်နိုင်အောင်သို့သော်ထိုသို့?
ဒီမေးခွန်းအတွက်အကြှနျုပျ၏ဒုတိယအဖြေကိုမှငါ့ကိုအဆောင်တတ်၏. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်ငါ့ပျော်စရာ၏အဆုံးကိုဆိုလိုတာ? ကျနော့်ရဲ့ဒုတိယအဖြေဖြစ်ပါသည်: တခါတလေ.
II ကို. တခါတလေ – ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့၏ပျော်စရာတချို့က၏အဆုံးအဓိပ်ပာမူမည်အောက်ပါ
ငါသည်သင်တို့ကိုလှည့်ဖြားချင်ကြပါဘူး. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသင်ကိုယ်တိုင်ငွငျးပယျဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ကိုဆိုလိုတာ. သင်တို့အဘို့အမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသင်ပျော်မွေ့သောအရာရှိပါတယ်, ရေရှည်မှာအစားကပေးကမ်း၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းခိုးယူသောအရာ.
မူးမိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှပျော်စရာပေမယ့်ဆောင်ပုံရသည်. လက်မထပ်မီလိင်ပျော်စရာပုံရသည်, ဒါပေမဲ့နွေးထွေးမှု၏နက်ရှိုင်းသောအဆင့်ကိုဘုရားသခငျသညျအောကျကတစ်သက်တာကတိကဝတ်မှမထောက်ဘဲခံစားခံရဖို့ရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှခဲ့ကွောငျး. ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်ရှင်းပေးနိုင်အနက်ရှိုင်းဆုံးလမ်းဖွင့်. တစျခါတကပျော်စရာမှဦးဆောင်တူလိမ်ပုံရသည်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့တခြားသူတွေထိခိုက်.
ကျွန်တော်တို့ပြီးသားအသိအမှတ်ပြုပါတယ်အဖြစ်, ဘုရားသခင့အသက်ရှည်သမျှဖန်ဆင်းသူကခံစားခံရဖို့ထင်ရဲ့ပုံကိုသိတယ်. ပညတ်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောငျးကြိုးအတှကျများမှာ. သူ၏လက်ျာဘက်၌အပျော်အပါးအစဉ်မပြတ်များမှာ. အကြှနျုပျတို့ကိုယ်တော်စကားနားမထောင်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ကိုပယ်စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှရွေ့လျားနေကြသည်. ဘုရားသခငျသညျအကောငျးဘဝကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မပါဘူး; ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားနားမထောင်ရသောအခါကျနော်တို့ကောင်းသောအသက်တာကနေကိုယျ့ကိုယျကိုစောင့်ရှောက်.
ထိုမင်းသည်လူအပေါင်းတို့အားကပြောပါတယ်, "မည်သူမဆိုငါ့နောက်ကြွလာမယ်ဆိုရင်, သူ့ကိုကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ကြကုန်အံ့, နေ့တိုင်းမိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူ, ငါ့နောက်သို့လိုက်။ " (လုကာ 9:23)
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှမတျောသညျကိုဆိုလို. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ငြင်းဆန်. သငျသညျသဘာဝလုပ်ချင်သောအရာကိုငြင်းပယ်.
ဒီကောင်းတဲ့နှင့် fluffy အသံမပါဘူး. သင်ဟာတစ်လက်ခဏာကတ်ကိုအပေါ်ကြောင်းကိုမထားမယ်လို့. ဤသည်ကိုတပည့ရန်အလွန်အားတက်စရာမဟုတ်ပါဘူး. ယရှေုသညျပဲထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ဆိုလိုနှင့်စော်ကားနေပါသည်?
ကျွန်တော်တို့စုံလင်သောဖြစ်လျှင်, ကိုယျ့ကိုယျကိုငွငျးပယျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းရယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့အမြဲကောင်းပညာရှိကိုယျ့ကိုယျကိုငွငျးပယျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းထူးဆန်းလိမ့်မယ်လိုလျှင်. ငါတို့မူကားချို့ယွင်းချက်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကလမ်းလွဲခြင်းနှင့်ဖွင့် messed နေတယ်ဆိုရင်, ကိုယျ့ကိုယျကိုငွငျးပယျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းအထောက်အကူဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအစဉ်အမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံကြည်နိုင်. သင်တို့အဘို့အမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသင်ပျော်မွေ့သောအရာရှိပါတယ်. သငျသညျပျော်စရာသလိုပဲကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရာ၌ခန့်ထားပြီ, သင်မူကားနောက်ပိုင်းတွင်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်?
သငျသညျငါ့နောက်သို့လိုက်ချင်လျှင်ယရှေုသညျဟု, သင်ကိုယ်တိုင်အောက်ပါရပ်တန့်ရန်ရှိသည်. ဒါဟာလမ်းညွန်များအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကတောင်းနဲ့တူရဲ့. သငျသညျသဘောပေါက် အကယ်. သင်သည်မှားလမ်းမသွားဖြစ်ပါဘူး, သင်ကူညီတစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးမြန်း, သင်သည်သင်၏လမ်းကိုသွားမထားနိုင်. အောက်ပါယရှေုသညျသငျသညျကိုညွှန်ကြားရန်သင့်အားဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်တသဘောဝန်ခံနှင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ယေရှုပြောနေ, လွတ်ပါ. ငါ့ကိုစတီယာရင်ဘီး Give. သငျသညျအကြှနျုပျကိုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပ်တော်မယ့်. ငါမာစတာရယ်. ငါခေါင်းဆောင်ပေါ့. ဒါဟာငါ့နောက်ကြွလာရန်ဆိုလိုသည်ကားအဘယ်သို့.
ကျွန်တော့်ဇနီးကပြောသည်မှန်လျှင်, သငျသညျကျွန်မခင်ပွန်းဖြစ်လိုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ငွငျးပယျငါ့နောက်သို့လိုက်ရန်ရှိသည်. ငါဟမ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ချင်ပါတယ်? ငါ၏သားကပြောသည်ဆိုရငျ… သူစကားပြောမနိုင်ကတည်းကငါတကယ်အံ့သြဖြစ်ချင်ပါတယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတကပြောသည်မှန်လျှင်, ငါကပယ်ချမယ်လို့. ငါ၏အသင်းအုပ်ဆရာကပြောပါတယ်ရင်တောင်, ငါမကိစ္စကြောင့်အဘယ်သို့ဆိုသမြှကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငွငျးပယျပြု, ကျနော်လည်းတခြားဘုရားကျောင်းသွားချင်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်? ငါနောက်ထပ်ဆိုးယုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှလုံးဝကျော်ငါ့အသက်ကိုများ၏ကျောက်ကပ်ပေးချင်ကြပါဘူးကြောင့်,. ဒါကရယ်စရာင်. ဒါဟာအကြှနျုပျကိုမကူညီဘူး. သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုဿုံငါ့အသက်ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမနိုင်. သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စများရှိ.
သို့သော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အခြားအပွစျရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ. သူသည်သန့်ရှင်းသောင်, သူသည်ငါ၏ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့, သူသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုဘုရားသခင်အား ပြန်. ခံရနိုင်နိုင်အောင်သေဆုံး. သူကသစ္စာရဲ့. သူကငါ့အသက်ကိုကြည့်သင့်ပါသိ. သူယုတ်ဖြစ်ခြင်းမ, သူကကျွန်မကိုမေတ္တာပါရဲ့. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသင်သည်တခါတရံကိုယ့်ကိုကိုယ်မှမဆိုတက်လက်မှတ်ထိုးဆိုလိုသည်.
သင်မှန်မှန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှမဟု ဆို. မရနေတယ်ဆိုရင်, သင်တကယ်ကိုသညျယရှေုကိုအောက်ပါတော့မည်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်. ကျွန်တော်မှန်မှန်မှားနေနှင့်ကျွန်တော်သူ့အကူအညီလိုသောကြောင့်.
ကမျြးစာ၌ realest စာအုပ်တွေတစ်ခုမှာဒေသနာ၏စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဖြစ်နိုင်သည်ရှောလမုန်ကရေးသားင်. အထဲတွင်, သူအရာအားလုံးကိုအနတ္တဖြစ်၏ဘယ်လိုအကြောင်းပြောသွား. သူအရာအားလုံးကိုတွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးပြီးကတည်းက, သူအတွေ့အကြုံကနေပြောသော. ဤတွင်သူကပြောသည်ယျ.
"ပိုက်ဆံချစ်သောသူသူကငွေနှင့်ဝကြလိမ့်မည်မဟုတ်။ " (ဒေသနာ 5:10)
ဒါငျသညျဤယူနိုင်, ဤနေရာတွင်အဖြစ်ကြှနျုပျတို့သညျသှား. သူတို့ကအရာအားလုံးကိုမုန်း, ပိုက်ဆံအပါအဝင်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုကခံစားချင်ပါဘူး. သို့မဟုတ်သင်ဘုရားသခင်သည်သင်ကျေနပ်အောင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုပြီးနောက်လိုက်ဖမ်းမှသင်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အဖြစ်မြင်ရနိုင်
လူတိုင်းလည်းဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုခံစားကြွယ်ဝမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အာဏာပေးတော်မူပြီမှအဘယ်သူကို, နှင့်သူ၏အများကြီးကိုလက်ခံနှင့်သူ၏ပင်ပန်း-ဤသည်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဘုရားသခင်၏ဆုကြေးဇူးဖွစျသညျ. ဘုရားသခငျသညျသူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သိမ်းပိုက်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, သူအများကြီးမိမိအသက်ကာလကိုအောက်မေ့မည်မဟုတ်သည်ကို. (ဒေသနာ 5:19-20)
တစ်ဦးငြင်းခုံဖြစ်? ပိုက်ဆံခံစားကြည့်ပါ? ငါကသူသည်သင်ကျေနပ်အောင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်ထင်. ဘုရားသခငျသညျဝမျးမွောကျခွငျးကိုပေးတော်မူ၏, မပိုက်ဆံ. ပိုက်ဆံသင်ကျေနပ်အောင်မထားဘူး, ဒါကြောင့်ပဲသင်ပိုမိုပိုက်ဆံချင်စေသည်. ထိုသို့အသက်ရှင်ရန်စကားမပြောနိုင်သောကြောင့်ဖွင့်. သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုခံစားနိုငျ, ဒါကြောင့်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ကျေနပ်အောင်လိမ့်မည်ဟုမိစ္ဆာယူဆချက်အောက်တွင်နေထိုင်သောမပါဘဲ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာကျနော်တို့ဆုကြေးဇူးကိုအစားအရှငျဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်ကြောင်း, ဖန်ဆင်းခြင်းအစားဖန်ဆင်းရှင်. ကျနော်တို့ကပတ္တူအစားအပန်းချီဆရာကိုးကှယျခငျြ, အစာမကျြနှာအစားရေးသားသူ. ကျနော်တို့အစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသူကို One ရဲ့ပိုက်ဆံကိုလိုက်ချင်. ယရှေုသညျကငွငျးပယျကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆို.
ခရစ်ယာန်တွေဟာပျင်းဘို့ပျော်စရာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်, ဝမ်းနည်းခြင်းအတွက်သို့မဟုတ်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်. သူတို့ကယာယီပျော်ရွှင်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ, ထာဝရအသပျော်ရွှင်မှုများအတွက်. သူတို့ကသေစေနိုင်သောပျော်ရွှင်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ, ဘဝပေးကမ်းပျော်ရွှင်မှုများအတွက်. သူတို့ကခဏအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ, အပွောငျးအလဲပျော်ရွှင်မှု, တည်ငြိမ်တဲ့အတှကျ, အစိုင်အခဲပျော်စရာတွေကျောက်.
III ကို. ကြှနျုပျတို့မညျဆီလျြောစှာသောအရာများကိုခံစားကြည့်ပါပါနဲ့?
ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ဖြစ်စေမ, ကြှနျုပျတို့အားလုံးယုံကြည်ခြင်းကိုလူဖြစ်ကြ၏. တိုင်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိ. ခရစျယာ, မွတ်စလင်များ, ဟိန္ဒူဘာသာ, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ, Agnostic, ဘုရားမဲ့ဝါဒီ-အားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်, ကျမတို့ကလည်းဘယ်ပေးထားယခုအချိန်တွင်အတွက်ကျနော်တို့ယုံကြည်ရာ၏အလငျး၌နထေိုငျ. အားကစားသမားနေသောသငျသညျမြားကိုတကယ်ခက်ခဲလေ့ကျင့်. အဘယ်ကြောင့်? သင်ကသင့်ရဲ့အားကစားမှာသင်ပိုကောင်းစေပါလိမ့်မည်ယုံကြည်သောကြောင့်. ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဤအကြောင်းကို? သင်တို့တွင်အချို့သောအရပ်တို့ကိုရရန် Google Maps မှာလိပ်စာထား. အဘယ်ကြောင့်? သောကြောင့်သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုသင်ျာလမ်းညွန်ပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်. သငျသညျယုံကြည်သည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသငျသညျလှည့်စားမယ်လို့, ငါငါ့ဥစ္စာတခါတရံမထင်, သင်ကအသုံးပြုခဲ့ကြမည်မဟုတ်. ငါအပေါ်သွားနှင့်အပေါ်နိုင်. ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်.
ငါသည်ကောင်းသောဘဝကောင်းတစ်ခုဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ထင်. သူကမှန်ကန်စွာသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းခံစားပုံကိုဖျောပွ. သူဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်.
ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ထင်, ငါမလိုချင်ကြဘူး. ငါပျော်ရွှင်စရာရှိသည်ဖို့လိုခငျြ. စိတ်ထဲတွင်သဘောကျခံရ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားအားလုံးဘဝအကြောင်းသည်မဟုတ်. သငျသညျကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, သငျသညျကြောက်စရာတစ်ခုခုရောက်နေ. သငျသညျပျော်စရာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်သင်၏အသက်တာကိုတညျဆောကျခဲ့လျှင်, ဘဝခက်ခဲအခါကဆငျးသကျဖရိုဖရဲလာလိမ့်မယ်. ပျော်စရာ, စိတ်ထဲတွင်သဘောကျခံရ, အခုအချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားလုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး. နိစ္စထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုက်မအဘယ်ကြောင့်?
ထိုသို့အကြာတွင်မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး. အဘယ်ကြောင့်အသကျရှငျစတငျဖို့စောင့်ဆိုင်း? အတုအရာလိုက်ဖမ်းရပ်တန့်ပါနှင့်အစစ်အမှန်အရာလိုက်ဖမ်းစတင်.
ဒါဟာ NBA လျစ်လျူရှုတူရဲ့, သငျသညျအစား PlayStation အပေါ် NBA 2K ကစားလို့. အတုအရာလိုက်ဖမ်းရပ်တန့်ပါ, နှင့်ရရှိနိုင်ပါရဲ့အစစ်အမှန်အရာဘက်ယမ်း. C.S. သူသည်ဤပြောကြသောအခါ Lewis ကအလားတူစိတ်ဓါတ်များထုတ်ဖော်ပြောဆို:
“ကျနော်တို့တဝက်အဆုံးမဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပူဇော်သောအခါ, သောက်စရာနှင့်လိင်နှင့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူအကြောင်းကိုအရူးလုပ်သတ္တဝါတွေ hearted နေကြတယ်, သူသည်ပင်လယ်မှာအားလပ်ရက်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုအားဖြင့်ဆိုလိုသောအရာကိုစိတ်ကူးမရနိုငျသောကွောငျ့တစ်ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှံ့ pies အောင်ပေါ်မသွားလိုသူတစ်ဦးကိုမသိဘဲကလေးကနဲ့တူ. ကျနော်တို့ဝေးလွန်းကိုအလွယ်တကူနှစ်သက်” - C.S. Lewis က, ဘုနျးတျောကို၏အလေးချိန်
ငါသည်အသက်သမျှသောဤခဏအပျော်အပါးခဲ့သည်ထင်ဖို့အသုံးပြု. ထိုအခါငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်. ကောင်းကျိုးအသက်တာ၏အကြှနျုပျ၏ဟောင်းရုပ်ပုံဖြိုဖျက်ကြောင်းခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ငါသည်စောစောပေါ်ဖတ်အမှုအရာရှိ. ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖွင့်.
သည် Gain Die ရန်
ကြှနျုပျတို့အားလုံးလူအခြိနျမှနျမှသေခြင်းတရားအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြားရကြပြီ. ကျနော်တို့လူတွေပြောပါကြားဖူးတယ်, "အသက်တာ၌အဘယ်အရာကိုမျှမြဲမြံသောဒါပေမဲ့သေခံခြင်းနှင့်အခွန်အခများသည်."တစျခုမှာလူကြိုက်များရက်ပ်ကပြောပါတယ်, "ငါအသေခံခိုးမနိုင်ဘဝအကြောင်းမရှိရိုက်နှက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ " လူတွေကသေဆုံးရှောင်ရှားမရနိုင်သည်ကိုနားမလည်. သို့သော်လူငယ်တစ်ဦးခရစ်ယာန်အဖြစ်, ငါအစဉ်အဆက်တို့ရှေ့မှာကြားဖူးဘာမှမတူခဲ့သောကမျြးစာ၌သေခြင်းအကြောင်းတစ်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်. တမန်တော်ပေါလုကထူးဆန်းတဲ့လမ်းအတွက်အသေခံအကွောငျးပွော. ပေါလုကန့်အသေခံအချို့သောခဲ့မပြောခဲ့ပါဘူး, သူတစ်ဦးခြေလှမ်းနောက်ထပ် ယူ.. ဟုသူကပြောသည်, "သေဆုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ် အကျိုး." ဘာ!?
အခါသင့်ဦးနှောက်ကိုသေမင်းသည်, သငျ့နှလုံး, နှင့်သင့်အဆုတ်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြရပ်တန့်. သေခြင်းသို့မိသားစုဝင်များမှအသက်နှင့်ခွဲခြာ၏နိဂုံးကိုဆိုလိုသည်. သခွေငျးတရားသင်၏အသက်တာရဲ့အလုပ်ကျော်ဆိုလိုတာပါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားစမ်းသပ်မှုတွေမတူဘဲ, သေမင်းသည်, ကွယ်လွန်သူများအတွက်, စာသားအရ "ဤလောက၏အဆုံး"– ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခု၏အဆုံး. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသေဆုံးဖြစ်နိုင်သည်အမြတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ငါသေသောအခါငါငွေရှာမရနိုငျ? ငါသေရသောအခါငါသည်ငါ့အဆင့်အတန်းကိုတိုးမြှင့်မနိုင်. ဒါဟာရုံကောင်းသောအသက်တာ၏အကြှနျုပျ၏ဟောင်းအမြင်များနှင့်အတူ fit ဘူး.
ကောင်းပြီအမြတ်-ငါလက်ျာဘက်သူတို့ရှေ့မှာလာသောလေးနားလည်ခဲ့ရတယ်သည်ငါပေါလုသည်ဤလေးယောက်စကားသည်မှသေဆုံးအားဖြင့်ဓိပ်ပာယျကိုနားလညျဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်. ဖိလိပ္ပိခုနှစ်တွင် 1 သူအသကျရှငျနထေိုငျသို့မဟုတျသူ၏ညှဉျးဆဲ၏လက်မှာသေဆုံးတစ်ခုခုနှင့်အတူ ok ဖြစ်ဟန်အဘယ်ကြောင့်ရှင်ပေါလုကရှင်းပြသည်. သူကအခန်းငယ်ထဲမှာရေးသားခဲ့သည် 21, "အသကျရှငျဖို့ IS ခရစ်တော်။ "အဲဒီစကားနဲ့အတူ, တမန်တော်အားလုံးအကြောင်းကိုတကယ်ကဘာလဲဆိုတာဘဝပြောတယ်- မပိုက်ဆံ, ငါ့အလုပ်, မပင်မိသားစု- သို့သော်ယေရှု. ဘယ်လိုအကြှနျုပျ၏ Self-ဗဟိုပြုနိုင်, အဆင့်အတန်း-အစွဲအလမ်း worldview လာမည့်အမှန်တရားမှရှင်သန်?
ဘဝကခြားခရစ်တော်ကိုမခံမအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်, ခရစ်တော်ကအားလုံးကိုအကြောင်းဖွင့်ကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့. သို့ဖြစ်. ထိုမှန်ကန်စွာအမှုအရာခံစား, ကျနော်တို့ကအမှနျတရားသက်သေခံတစ်လမ်းအတွက်သူတို့ကိုပျော်မွေ့ရန်ရှိသည်.
အရာအားလုံးခံစားကြသောအခါ သာ. ကောင်း၏ ထိုအခြေအနေတွင်ကြောင့်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့. ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ကိုယ်တိုင်ကတူဘာမှပြုမူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကမှားဖွင့်. ငါတို့သည်ဘုရားသခငျ့ဘုနျးတျောရဲ့အဆုံးမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်သင့်သူတို့ကို.
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှများစွာသောမိန်းမနှင့်အတူလိင်ရှိသင့်? သို့မဟုတ်ပင်ပဲသင်နှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးတွင်ရောက်နေအကြင်သူသည်? လိင်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသောပဋိညာဉ်တရားအတွက်ခံစားသည်. သူတို့ဘဝ၏ကျန်များအတွက်အချင်းချင်းကျူးလွန်လူနှစ်ဦး, ဘယ်နေရာမှာမဆိုမသွား. မလုံခြုံမှုအဘို့မလိုပါဘူးင်, မရှက်. ချစ်ကြည်ရေးအကောင်းဆုံးဤအခြေအနေတွင်ခံစားသည်. နှိမျ့ခခြွငျးရှိပါတယ်, အပြစ်လွှတ်ခြင်း, ကြေးဇူး, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ.
ဒါကြောင့်ကိုးကှယျကွမင့်လာသောအခါပိုက်ဆံအကောင်းဆုံးခံစားသည်. ဒါကြောင့်ကိုးကှယျကွမင့်လာသောအခါ Power ကအကောင်းဆုံးခံစားသည်. ဒါကြောင့်ကွယ်ပျောက်တတ်လာသောအခါဘာဖွစျ? ဖြည့်ညှင်းစပျစ်ရည်ကိုသောက်ကြူးခြင်းထက် သာ. ကောင်း၏. ထိုအခါသင်တန်း,fသင်သည်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်ခံစားနိုငျ. ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံး၏အသကျအဓိပ်ပာယျဆက်စပ်ပုံကိုအကြောင်းစဉ်းစား: ခရစ်တော်. ထိုသို့ခရစ်တော်အားတင်ပြသည့်အခါအရာအားလုံးအကောင်းဆုံးခံစားသည်.
ကျနော်တို့ကျိုးကြ, ခရစ်တော်သည်လည်းအတူတူကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,. ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံကိုးကှယျရတဲ့အခါ, သို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, သို့မဟုတ်လိင်, ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အားတစ်ပြစ်မှုင်. အကြှနျုပျတို့သူတို့အားပြစ်မှုများအဘို့အစီရငျခွငျးကိုခံရဖို့ထိုက်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကိုစလှေတျ. ယရှေုသညျမှားသောအရာတို့ကိုခံစားအတူပြဿနာတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, သို့မဟုတ်တစ်ပွစျသားလမျး၌ကောင်းသောအရာခံစား. သို့သျောလညျးကိုယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာငါတို့ပြစ်မှုများများအတွက်ပြစ်ဒဏ်ယူ. သူကသင်္ချိုင်းကနေထငါတို့အားထာဝရအသက်ကိုကမ်းလှမ်း.
ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းနည်းလမ်းများထားခဲ့ခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ထံသို့ဆည်းကပ်မှီဝဲပါလိမ့်မယ် အကယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်လွတ်နိုင်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ထည့်သွင်းနိုင်. ယခုကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေထိုင်မည်မဟုတ်. ဒါပေမယ့်သူကအစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ပေးလိမ့်မယ်.
ဗစ်တာ • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 2:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Triggz • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 4:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး!သင်အမှန်တကယ်ဘုရားသခငျသညျ brah ၏အိုးများမှာ,သငျတို့သ God.these ရေးသားချက်များ၌သင်တို့၏ယုံကြည်မှုနှင့်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်တွေအများကြီးလာအောင်နှိုးဆွငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့အကြီးအကျယ်လမ်းအတွက်ငါ့ကိုပြောင်းလဲငါသည်သင်တို့ကို ထောက်. ကျွန်တော်တို့ကိုငါဘာတစ်ခုမှမယ့်သင်တို့ကဲ့သို့ဖြစ် all.One နေ့ကရေးသားစောင့်ရှောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြ,(ကျွန်မတစ်ဦး 6year အဟောင်းကဲ့သို့မြည်သိကြ)အကြောင်းကြောင့်ငါပြီးသားအခုနထေိုငျတာဘာကြောင့်ခရစ်ယာန်အကြောင်းမရှိငါ့ Rap ဂီတနဲ့ကဗျာ switched င့်,အကြှနျုပျသညျနှငျ့တူပုဒ်မှကျေးဇူးတင်စကားဝိညာဉ်တော်နှင့် HIP HOP.stay မင်္ဂလာရှိ၏
Dawg နှင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ 116!
Deondre • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 4:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသညျယရှေုအမည်ခုနှစ်တွင်သင်၏အသက်တာ၌ရှိသမျှသောဧရိယာ၌သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူဆက်လက်ဈသင် listener.May ဘုရားသခငျသညျမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှုယူဆောင်ယုံကြည်မှတ်ချက် bro စွန့်ခွာဖို့လိုအပ် dont…
မောရစ် • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 4:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Geordan • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 5:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သူအကြောင်းကိုပြောသောအခါ “Cheesey ခရစ်ယာန်တေးဂီတ” ငါထအက်, ဟားဟား. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် , ခရီးစဉ်ကို.
ကိုးလ်ခရစ်ယာန် • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 5:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ် Post ဖြစ်ပါတယ်! စကားတော်နှင့်အလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို! သူတို့ကကြားဖူးလိုက်မသွားဘူး.
JESSIE • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 5:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကောင်းစွာဖော်ပြထား. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Ruach HaKodesh, ဒီဆန္ဒရှိရေယာဉ်မှတဆင့်ကြောင်းအမှန်တရားကိုစကားပြောဘို့. Awesome ။.
BrookeMeghan • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 5:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
“အသက်ရှင်ရန်ခရစ်တော်ဖြစ်၏, နှင့်သေဖို့အမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။” ဖိလိပ္ပိ 1:21 – သခင်ဘုရား, ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဤအထဲကအသက်ရှင်မည်အကြောင်း! ကျနော်တို့ကိုသင်၌ရှိသည်လွတ်လပ်ခွင့်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ယေရမိက • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 5:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါတရားဟောချက် , ကောင်းတယ် ,, ဂုဏ် !!!!!
ကာလကျ • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 5:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယမစ္စတာ. Lee က.
Kshund • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 7:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်သစ္စာဉာဏ်အလင်း persepective. တကယ်ပဲသင် C.S မှကိုးကားထည့်သွင်းပုံကိုခံစား. Lewis က mudpies နှင့်အတူကစားခြင်းထိုသူငယ်ကိုရည်ညွှန်းပြီး. ကျနော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကအဖြစ်လေးရယ်အသက်ခံစားနိုငျ!
MasiyaChoice • အောက်တိုဘာလ 24, 2013 တွင် 11:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပင်သေဖို့ရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်. ခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်စေခြင်းငှါငါတို့သည်လည်းထိုသခင်အဘို့အနထေိုငျသင့်၏ကြောင့်သေဆုံး. လူငယ်များရဲ့လောကီကာမဂုဏ်ကိုခဏ၌သေပါစေနှင့်ကောင်းကင်ဘုံရှင်စည်းစိမ်၌အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်း.
STEPH • အောက်တိုဘာလ 25, 2013 တွင် 12:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မဘလော့ဂ်ခရီးစဉ် Lee ကတန်ဖိုးထား. ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းနေစဉ်ငါသည်ဤအတူအများကြီးရုန်းကန်, ပင်ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်ယခုနေစဉ်အချိန်များတွင်…ကိုယ့်လမ်းအတွက်အမှုအရာကိုခံစားဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေသညျယရှေုအရာအားလုံးကြောင်းနှင့်ထွက်နေထိုင်ခဲ့ကဲ့သို့ကြည့်သောအရာကိုသက်သေခံ. နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်.
MotsiriLebea • အောက်တိုဘာလ 25, 2013 တွင် 5:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ငါစကားအပေါ့. တကယ်လိုပဲ ? ငါငါသည်ခရစ်တော်ထံသို့လာမတိုင်မီ myslef ကိုပြောင်းလဲတယ်ထင်ပေမယ့်မှားဆိုလို.
့ Yuri • အောက်တိုဘာလ 25, 2013 တွင် 9:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကိုပစ္စည်းပစ္စယ! ငါဘုရားသခငျ့လက်ရာများ၏ဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအားဤတနင်္ဂနွေနေတဲ့ Chapel သတင်းစကားကိုပေးခြင်းငါ. ဤရွေ့ကား, ငါသည်အများဆုံးဖွယ်ရှိလည်းသူတို့နှင့်အတူအဖုံးကိုမညျဖွစျကွောငျးအကြီးအမှတ်ရှိပါတယ်.
Kiara • အောက်တိုဘာလ 26, 2013 တွင် 7:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီ post စစ်မှန်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်.
လိုက်လံ • အောက်တိုဘာလ 28, 2013 တွင် 3:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်သတင်းစကား, ခရီးစဉ်ကို. အနုပညာရှငျမြားနှငျ့၏ရှိရာအများစုကဒီမှောင်မိုက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးအလင်းဖြစ်ခြင်းအပေါ်သိမ်းဆည်းထားပါ & မီဒီယာတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးထဲကခရစ်တော်အားစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစား. လူကောင်းများ, သူ၏အသွေးအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, အစဉ်အမြဲအဆုံး၌အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်!
Shauneil • အောက်တိုဘာလ 28, 2013 တွင် 5:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
harbeegail • အောက်တိုဘာလ 28, 2013 တွင် 5:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဆိုသည်ကားရမယ်… ဤသည်ဘုရားသခင်ထံမှသတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက်လူငယ်နေရခြင်းမနေ့ကဒီအကြောင်း talkd သူတို့အပယ်ခံများကဲ့သို့ငါ့ကိုမြင်. ကျွန်မစိတ်သက်သာရာခံစားရနှင့်ယခုနှင့်အတူ strenghtened. အဘယ်သူမျှမပြန်မယ့်… ယရှေုသညျအစဉျအမွဲ. ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် bro ပို.
ရစ်ကီယော်ဒန်မြစ် • အောက်တိုဘာလ 29, 2013 တွင် 2:26 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
uche • အောက်တိုဘာလ 29, 2013 တွင် 3:16 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တဦးတည်းစကားလုံး '' wow!!!’
လဲလှယ် • အောက်တိုဘာလ 29, 2013 တွင် 8:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျ bro ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါတကယ်ကဒီလိုအပျ. ခရစ်ယာန်လူငယ်တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်, ကျွန်မမကြာခဏအဘယ်အရာကိုပျော်မွေ့ခြင်း၏မှားယွင်းတဲ့အနက်ကိုဆည်းပူးင့်နှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်ဤဖတ်ရှုပြီးနောက်, ကျွန်မအနည်းငယ်ပိုကောင်းနားလည်တူသောငါခံစားမိ. ငါသည်ဤကယ့်ကိုတန်ဖိုးထား. ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ, ဘုရားသခငျသညျသငျနှငျ့မိသားစုကောင်းကြီးပေးတော်မူ. ယေရှု၌သငျသညျကိုခစျြ…
Elvis • အောက်တိုဘာလ 29, 2013 တွင် 11:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်ဤ website နှင့်သင့်ဒေသခံဘုရားကျောင်းနှင့်အတူလုပ်နေခဲ့ကြရတယ်အဘယျသို့အဘို့စိတ်လှုပ်ရှား…ငါစတူဒီယိုထဲမှာဦးနောက်ကျောကိုမြင်လျှင်အဘို့အများအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်…ကျွန်မဦးလာမယ့်အရာကိုအဘို့အသီးဖျော်ရည်ရယ်
Lewis က unelle ပါလိမ့်မယ် • အောက်တိုဘာလ 30, 2013 တွင် 8:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကချစ်စရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလာသည်ကျမ်းပိုဒ် Phillipians အကြောင်းကိုဟော ပြော. အဘို့ဤမျှလောက်ငါ့ထံသို့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 1:21. ငါတရားဒေသနာကိုနားထောင်သောအားဖြင့်နားလည်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြရတယ်. ငါသည်ဘုရားသခင်၏မြှင့်တင်ရန်သင်အသုံးပြုဆက်လက်တည်ဆောက်-on နိုင်ငံတော်သို့ဆုတောင်းပဌနာ. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျ bro ကောင်းကြီးပေးကြလော့။. ငြိမ်းချမ်းရေး & ချစ်ခြင်းမေတ္တာ♡
DavidMoyo • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဝီလျံဖြစ်ပါသည်, တကယ်ကိုယ့်ကိုယ်သခင်ဘုရား၏အသုံးပြုခွင့်ပေးရန်သင့်ရဲ့ Transperent နှင့်သင့်အရှက်တန်ဖိုးထား. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ
Marjorie • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 7:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်နှင့်ဤဘလော့ဂ်ပေါ်မှာများစွာသောအခြားမက်ဆေ့ခ်ျများအချိန်ပေါ်မှာ right များမှာ & ပွိုင့်အပေါ်! သခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့! ဤ blog အောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, အစဉ်မပြတ်ငါဒါကြောင့်သင့်ရေးသားချက်များအားဖြင့်သခင်ဘုရား၌အားပေးခဲ့တယ်နော်. စကားပြောနှင့်အရေးအသားအပေါ်စောင့်ရှောက်ပေးပါ! ဘုရားသခငျသညျသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း!
ဂျနီဖာ • နိုဝင်ဘာလ 15, 2013 တွင် 7:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဤသတင်းစကားကိုတကယ်ပဲငါ့ကိုမအားပွောဆို! သငျသညျဘုရားသခငျသညျအဘို့နှင့်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ unashamed ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. လည်း, ဘုရားသခင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူခွင့်များအတွက်. ဘုရားသခငျသညျသငျနှငျ့သငျ့အံ့သြဖွယ်မိသားစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ!
Endy • ဇန္နဝါရီလ 19, 2014 တွင် 5:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး!! ဒီအခိုက်အအထိ, ငါသည်ဤ kinda ပွင့်လင်း tho't,interestin,ကိုယ့် #Francinerivers စာအုပ်များမှဖတ်များကဲ့သို့လက်တွေ့ကျကျခရစ်ယာန်ဘာသာစိတ်ကူးယဉ် jst ခဲ့သည်. ငါဘာမှမပြောစကားလုံးများကိုကင်းမဲ့. ဤသည်မှာအပိုင်းအစတကယ်ပဲငါ့ကိုတစ်ခုခုထိမိခြင်းနှင့်ယခုအဆင်သင့်ဖြစ်၏ထားပါတယ် 100% God..thanks TL..God များအတွက်အသက်ရှင်ရန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်ကူညီ. #အာမင်!
မိုက်ကယ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 1:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကို, ကိုယ်တကယ်သရုပ်ဖော်ပုံများကြိုက်တယ်.
ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အတွက်သစ်တစ်ခုစင်ကြယ်သောနှလုံး created, ပညတ်တော်တို့ကို greivous လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. (1ဂျွန်)
ငါ့ကိုမှားရမနေပါနဲ့, ကျနော်တို့နေဆဲသင်ကြားမှုလိုအပ်ပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရလျှင်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လုပ်ချင်မည်မဟုတ်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. အပြစ်သွေးဆောင်ရာနေဆဲမျှသံသယလာကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်းခံနိုင်သောအရာကိုအထက်တွင်ကြိုးစားခဲ့ခံရဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်. သူကတစ်ဦးထွက်ပေါက်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်.
ယောရှု • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2014 တွင် 2:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ် trip! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ငါသည်သင်တို့၏တရားကိုခစျြ, သူတို့သညျငါ့ကိုကျနော်တို့ကယ့်ကိုအကောင်းတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျမသဘောပေါက်အောင်. သငျသညျ bro ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ကောင်းမွန်သောအလုပ်တက်အောင်ထားပါ.
ငါရယ် 17 အသက်အနှစ်, ငါ့ကိုဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျအဘို့အံ့သြဖွယ်အနာဂတ်ချထားပါတယ်သိကြ.
ငါသည်လည်းရေးထားသမျှသောသင်၏အတရားဟောထွက်ထောက်ပြချင်တယ်. သငျသညျအရမ်းရယ်ရတယ်စာတစ်စောင်မေ့ “OF” သငျသညျရေးသားခဲ့သည် “f” အရမ်းရယ်ရတယ်ရုံအားလုံးင်သောငါ၏မျက်စိဖမ်းမိ. ဒါဟာဘယ်မှာင်
“… ထိုအခါသင်တန်း,fသင်သည်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်ခံစားနိုငျ. ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံး၏အသကျအဓိပ်ပာယျဆက်စပ်ပုံကိုအကြောင်းစဉ်းစား: ခရစ်တော်. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ထံသို့တင်သွင်းသည့်အခါအရာအားလုံးအကောင်းဆုံးခံစားသည်။”
ငါကပိုနားမထောင်ဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည်! သငျသညျ bro ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Galactic • အောက်တိုဘာလ 19, 2014 တွင် 12:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါ, အရာအားလုံးကဒီမှာကြင်သွားနှင့် ofcourse အသီးအသီးသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းစစ်မှန်စွာဒဏ်ငွေင်, စာအရေးအသားကိုတက်စောင့်ရှောက်.
Justin • အောက်တိုဘာလ 29, 2014 တွင် 9:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
wow ကိုသင်အံ့သြဖွယ်စာရေးဆရာနှင့်ဆရာများမှာ! သငျသညျဝငျကမျြးခြင်းတရားကိုဟောပြောရသောလမ်းကိုဒါသိရှိဖြစ်ပါသည်. ငါတနေ့လုံးနားထောင်ရန်နှင့်သင့်တရားဒေသနာကိုဖတ်ရှုနိုင်! သူတို့ကအသက်ဝိညာဉ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အစားအစာများမှာ. ဘုရားသခငျသညျသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေး!
Olobz • ဒီဇင်ဘာလ 1, 2014 တွင် 5:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့တစ်ကောင်းသောမော်ဒယ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှု. ကျနော်တို့အားလုံးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တွေ့မြင်မျှော်လင့်ပါတယ်, ထို့နောက်သာထို့နောက်ကျွန်တော် '' ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံသီခငျြးဆိုငျနိုငျ’ ကမယ့်တန်ဆာထဲမှာ. ယခုသည်ဘုရားသခကောင်းကြီးပေးတော်မူ
Keaton • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2015 တွင် 12:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
bro, ငါကပိုတစ်ခုဂီတပညာရှင်ထက်တရားဟောဆရာသကဲ့သို့သင်တို့အရမ်းလေးစားမိပါတယ်သင်တို့သည်လည်းငါ၏အကြိုက်ဆုံးရက်ပ်များမှာ. ငါတကယ်မယ့်ဝန်ကြီးဝန်ကြီးဖို့အခြေခံပေါ်မှာစကားပြောဖို့အခွင့်အလမ်းကိုချစ်လိမ့်မယ်. ငါတကယ်ကိုယ်တော်အဘို့သင့်နှလုံးကိုချစ်. ငါ may အကယ်., ငါသည်သင်တို့ကိုဂီတအရှုံးမပေးသင့်တယ်ထင်ကြဘူး 100%. ငါက၎င်း၏တစ်ဦးပလက်ဖောင်းဘုရားသခငျသညျသန့်ရှင်းသူတို့သည်သူတပါးကိုတည်ဆောက်တတ်သည်နှင့်အပြစ်သားဧဝံဂေလိရန်သင့်အားပေးတော်မူပြီယုံကြည်. ငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခငျ၏လူနှင့်သင့်အံ့သြဖွယ်ဂီတလက်ဆောင်တွေကိုထိနျးကြောငျးဖို့လည်းကောင်းကောင်းငါသိစိတ်အားထက်သန်မှုပြန်လည်သင့်မြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပဌနာ. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျချစ်လှစွာသောအစ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ!
tamsyn • ဒီဇင်ဘာလ 28, 2015 တွင် 2:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အသက်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်အားအလှနျအရေးကွီးများမှာ! ထိုအ wow ငါဤမျှလောက်များစွာသော၏ရေးသားချက်များရှုမြင်သောအခါငါသင်၌ဘုရားသခင်မှတဆင့်လုပ်နေတယ်အလုပ်ကိုကွောကျရှံ့ပေါ့. ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်. အပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်သိမ်းဆည်းထားပါ. တိုင်းအမျိုးအနွယ်နှင့်သူ၏လှပသောကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်လူစုခွဲရန်သင့်အားအသုံးပြုတဲ့ရေဘုရားကိုကောင်းကြီးပေး. သူအပေါငျးတို့သမျိုးစပါးကြီးထွားနုနိုင်ပါစေ.